Shirkadda Soma Oil Oo Baaritaan kuhaaya Xafiiska Musuqmaasuqa ee Uk. – STAR FM SOMALIA
Shirkadda Soma Oil Oo Baaritaan kuhaaya Xafiiska Musuqmaasuqa ee Uk.
Guddoomiyaha Shirkadda shidaalka ee xarunteedu tahay dalka Britain Soma Oil & Gas Holdings Ltd. Michael Howard ayaa sheegay in ay la shaqeynayaan xafiiska musuqmaasuqa ka hortaga ee dalka Britain kadib markii eedeymo loo soo jeediyay shirkadda.
Baaritaankan ayaa la xiriira arrimo musuqmaasuq ah oo salka ku haya dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay shirkada Som gas ayaa lagu xaqiijiyay in xafiiska musuqmaasuqa uu baaritaan ku sameynayo eedeymo shirkada loo soo jeediyay.
Shirkadda oo uu madax ka yahay hogaamiyihii hore ee xisbiga Conservative dalka Britain Michael Howard. “Soma Oil & Gas waa ay ku kalsoon tahay in uu yahay war aan sal lahayn eedeymaha loo soo jeediyay ayna si wanaagsan ula shaqeyneyso xafiiska SFO ayna uga jawaabi doonto su’aal walba oo ay u soo jeediso.”
Shirkadda Soma ayaa sheegtay in wax eed gaar ah uusan xafiisku u soo jeedin guddoomiyaha shirkada Lord Howard. Wararka ku saabsan shirkadda ayaa intaa ku daraya in shirkada Soma ay heshiis la gaartay dowlada Soomaaliya kaasoo ah in boqolkiiba sagaashan lacagta adag ee ka soo xerooda marka la helo shidaal ay shirkadu yeelanayso.
Shirkada Soma ayaa ku qarash gareysay $40 million oo sahan ay ku sameysay dhul gaaraya 60,000 square kilometers (23,166 square miles) badda iyo xeebaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka oo loogu baaqay inay wax ka qabato Xadgudubyada AMISOM ay dadka rayidka ah ay ugeesanayaan